Iwu nzuzo - Elu Ngwọta Na Ngwọta Di elu, Co., Ltd.
PCBA Maka Fast chaja
Ikanam Driver Power Tụkwasịnụ
Omenala PCBA na Omenala chaja ngwa ngwa
Mbupu na Ịkwụ Ụgwọ
APS na-agba mbọ na-echebe onwe onye na ozi gbasara onwe na ị na-enye mgbe eji anyị website, nke mere na anyị na-na nnabata ya na iwu na ụkpụrụ banyere n'ji nzuzo na n'ji nchebe nnakọta, ojiji, nchekwa na nnyefe onwe onye data. ọkọlọtọ.
Ị denyere aha na anyị na website na ọmụma ga-anakọtara;
Ị na-ekweta anyị mmekọ, ndị mmekọ, ndị ọrụ, na i nwere ike inwe mmasị ngwaahịa na ọrụ nwere ike ịmasị gị (ma ọ bụrụ na i gosiri na ị na-achọghị na-enweta ndị dị otú ahụ ozi).
Collection na nhazi nke Personal Data
Anyị na-anakọta, jikwaa ma nyochaa onwe onye data na nkwenye gị. Na iji nye gị na ọrụ anyị, ị ga-mkpa-enye onwe onye data na-akpọghị aha ihe ndị anyị kwenyere na ọ dị mkpa izute gị ntụziaka na n'ihu mma ọrụ anyị, gụnyere ma na ọnweghị oke:
Bukọrọ aha, okike, afọ, ụbọchị ọmụmụ, nọmba ekwentị, nọmba faksị, adreesị ma ọ bụ adreesị nzipu ozi, email address.
The nzube na nzube nke obon onye data na-akpọghị aha ọmụma ndị dị ka ndị:
Nye gị ọrụ anyị site na anyị website;
Mgbe ị na-eji anyị website, ị nwere ike ịmata ma na-egosi gị njirimara;
Ka ị na-ahụ mmetụta gị mgbe na-eji anyị website;
Anyị ahịa ozi mkpara nwere ike ịkpọtụrụ gị ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa;
Statistics na ojiji nke anyị website;
Ka ọ dịkwuo mfe n'ihi na ị na-eji anyị na website;
Omume ahịa nnyocha nyocha ka mma anyị ngwaahịa, ọrụ na website ọdịnaya;
Anakọta ozi maka anyị na-eme, ahia na nkwalite mmemme;
Ime na iwu nile, ọchịchị na usoro iwu ọchịchị, gụnyere ma na ọnweghị oke na ngosi nke onwe onye data na Ịma Ọkwa;
Ka anyị na anyị mmekọ, ndị mmekọ, ndị ọrụ, mmadụ, ọrụ nwunye ma ọ bụ ndị ọzọ na otu nke atọ na-arụ ọrụ na anyị ná mba ebe i bi eme nkwalite nke ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ;
Tụlee, nyochaa na / ma ọ bụ inyocha gị n'aka, ịkwụ ụgwọ na / ma ọ bụ ọnọdụ na-akwanyere ndị ọrụ anyị na-enye;
Hazie ọ bụla ụgwọ ntuziaka, kpọmkwem debit na / ma ọ bụ n'aka ndokwa na gị arịrịọ;
Na-enye ohere ị na-arụ ọrụ na akaụntụ gị na / ma ọ bụ ka anyị nwee ike ịdọrọ pụtara ìhè ọrụ ụgwọ si na akaụntụ.
Kuki / Ndepụta na ndị ọzọ na usoro banyere Jiri anyị weebụsaịtị
Mgbe ị gara na anyị website, anyị na-eji Google Stats idekọ anyị ịrụ ọrụ site kuki. A kuki bụ obere ego nke data na e zigara nchọgharị gị na echekwara na kọmputa gị na draịvụ ike. Kuki nwere ike na-zitere gị na kọmputa na draịvụ ike mgbe ị na-eji kọmputa gị iji nweta anyị website.
Kuki na-eji idekọ àgwà na mmasị nke ndị ọbịa mgbe eme nchọgharị na dị iche iche ihe na anyị website. Ozi anakọtara site na kuki ahụ bụ unregistered mkpokọta ọnụ ọgụgụ na anaghị nwere onye data.
Kuki nwere ike ghara-eji na-enweta data na draịvụ ike gị, gị email address, na gị onwe data. Mgbe ị na-gaghachi anyị website, i nwere ike ichekwa na nzọụkwụ ka aha ọzọ. Kasị nchọgharị ndị preset ịnabata kuki. Ị nwere ike ịhọrọ ka nchọgharị gị na-anabata kuki, ma ọ bụ gwa gị ma ọ bụrụ na kuki na-arụnyere. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị ka a ban na kuki, ị nwere ike ọ gaghị enwe ike rụọ ọrụ ma ọ bụ iji akụkụ ụfọdụ nke anyị website.
Ọ bụrụ na ị na-tie iwu megide ma ọ bụ wepu kuki, oge ọ bụla ị na-eji otu kọmputa iji nweta anyị website (www.apstechgroup.com), anyị web server ga gwa anyị na i bịara na nke anyị website, na anyị ga-amata na i na ndebanye aha gị data na ugwo data. , Na-achịkọta ozi na ojiji, ahịa nnyocha, track ọganihu, na ikere òkè nkwado eme.
Ị nwere ike ịgbanwe ntọala na nchọgharị nke na kọmputa gị iji nweta anyị website-ekpebi ma ma ọ bụ na-anabata kuki. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ, ị nwere ike ịgbanwe ntọala gị na ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na ị na-etinye na mmasị gị na ihe nchọgharị gị, ị nwere ike na-anabata niile kuki, enweta na Ịma Ọkwa si kuki, na ọbụna na-ajụ ihe niile kuki. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ghara iji kuki ma ọ bụ na-ajụ ihe niile kuki na ihe nchọgharị gị, ị gaghị enwe ike iji ma ọ bụ rụọ ọrụ akụkụ ụfọdụ nke anyị website, ma ọ bụ i nwere ike mkpa ka re-nbanye gị data.
Save onye data na-akpọghị aha ozi
The onye data na-akpọghị aha ozi ị na-enye anyị na-na na-edebe ruo mgbe nzube nke collection e ruru, ma ọ bụrụ na a na-edebe dị na ọdabara iwu na ụkpụrụ.
Web analysis ọrụ (Google Analytics / Universal Analytics)
Anyị nwere ike iji Google Analytics ma ọ bụ yiri ọrụ na anyị website. Ndị a bụ ọrụ ndị ọzọ nyere, nke nwere ike dị na mba ọ bụla n'ụwa nile (na ikpe nke Google Analytics Google LLC bụ na US, www.google.com) na nke ka anyị tụọ na inwale ojiji nke anyị website ( na ihe anonymized ndabere). N'ihi nke a, na-adịgide adịgide kuki na-eji, nke na-setịpụrụ na-eweta ọrụ. The na-eweta ọrụ adịghị anata (na anaghị ejigide) ọ bụla onye data n'aka anyị, ma ihe na-eweta ọrụ nwere ike soro gị na ojiji nke website, ikpokọta ozi a na data si ọzọ weebụsaịtị ị gara na nke na-na-esoro site ọrụ dị iche na-eweta na ike iji ozi a maka ya na nzube (eg aka ịchịkwa nke mgbasa ozi). Ọ bụrụ na ị na ịdenyere aha na na-eweta ọrụ, ndị na-eweta ọrụ ga na-mara mara gị. Na nke a, na nhazi nke gị onwe onye data site na-eweta ọrụ ga-mụụrụ dabere na ya data nchebe ụkpụrụ. The na-eweta ọrụ naanị-enye anyị ihe data na nke nwoke website (ma ọ bụghị onye ozi nke ị).
Social Media nkwụnye ins
Ke adianade do, anyị na-eji nkwụnye ins si elekọta mmadụ na netwọk dị ka Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest ma ọ bụ Instagram na anyị weebụsaịtị. Nke a bụ anya n'ihi na ị (a dabeere na iche na akara). Anyị na-ahazi ndị a ọcha-nkwarụ ndabara. Ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ ha (site na ịpị ha), na rụọ nke nwoke na-elekọta mmadụ netwọk nwere ike idekọ na ị bụ na anyị website na ebe na anyị na website na ị kpọmkwem na nwere ike iji ozi a maka ha onwe ha na nzube. Nke a na nhazi nke gị onwe onye data na-atọ na ibu ọrụ nke nwoke ọrụ na-adị ya dị data nchebe ụkpụrụ. Anyị na-adịghị enweta ihe ọ bụla ihe ọmụma banyere gị site na nwoke ọrụ.
Anyị emeela kwesịrị ekwesị oru na nzukọ nchebe iji chebe onwe gị data-enwetaghị ikike ohere na-adịghị mma dị otú ahụ dị ka esịtidem atumatu, ọzụzụ, IT na netwọk nche ngwọta, ohere njikwa na mgbochi, izo ya ezo nke data na-ebu na transmissions, inspections.
Ọrụ dịịrị Nye Personal Data Iji Anyị
Na onodu nke anyị azụmahịa mmekọrịta ị ga-enye anyị na ihe ọ bụla onye data dị mkpa maka ọgwụgwụ na arụmọrụ nke a azụmahịa mmekọrịta na arụmọrụ nke anyị contractual ọrụ (dị ka a na-achị, ọ dịghị statutory chọrọ na-enye anyị na-data) . Enweghị ozi a, anyị ga-enwe ike ịbanye ma ọ bụ mepụta a nkwekọrịta na ị (ma ọ bụ na-adị ma ọ bụ onye ị na-anọchi anya). Ke adianade do, website ike ga-eji ma ọ bụrụ na ụfọdụ ozi na-mara aka data okporo ụzọ (eg IP address).
Mmegharị a Data Protection Statement
Anyị nwere ike megharịa a Data Protection Statement n'oge ọ bụla na-enweghị tupu mara. The ugbu a version bipụtara na website anyị ga-etinye. Ọ bụrụ na ndị Data Protection Nkwupụta bụ akụkụ nke ihe na nkwekọrịta gị, anyị ga gwa gị site na e-mail ma ọ bụ ndị ọzọ kwesịrị ekwesị n'aka bụrụ na nke ihe mmeghari.
Fast n'Aka Car chaja na USB , Fast n'Aka PCB Desgin , nkwụnye Adatpter PCBA , Desgined USB chaja , USB nkwụnye , Car chaja nkwụnye Factory ,